Qubanaha » Akhriso: Magacyada Safiiradii Soomaaliya u fadhiyay dalal dhowr ah ee Muqdisho u yimid ololihii doorashada.
Akhriso: Magacyada Safiiradii Soomaaliya u fadhiyay dalal dhowr ah ee Muqdisho u yimid ololihii doorashada.
Safiiro, Safiiro Kuxigeeno, iyo Diblomaasiyiin Soomaaliya u joogay dalal dhowr ah ayaa sifo aan sharci aheyn uga qeyb qaatay ololihii doorashada ee soo dhamaaday, kaasoo 6-dii bilood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho.
Arrinta ugu yaabka badan ayaa ah Safiiro dalal dhowr ah u matalayay Soomaaliya, inay howshooda soo dayaceen oo ay ka qeyb qaateen olole doorasho, iyagoo kala taageerayay Musharaxiin dhowr ah.
Safiiradan iyo Safiir kuxigeenada ayaa hada iyagoo xilal doon ah ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana qaarkood loo magacaabay xilalkii u horeeyay oo Agaasime ah, dad badan ayaa is weydiinaya Safiirada qaar in xilal sare ay ka door-bideen xilal hoose.
Waxa ay u kala ololeynayeen Musharixiin ay ka mid yihiin Shariif Sheekh Axmed , Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo)
Sharciga Diblomaasiyada caalamiga ayaa qaba in Safiir aanay fasax ka heysan Wasaaradda Arrimaha Dibadda uusan dalkiisa ku laaban karin, sidoo kale Safiirada iyo diblomaasiyiinta ayaa la siiyaa bil fasax ah sanadkii, iyadoo marka ay mudadaas u dhamaato dib ugu laabta dalalkii ay uga wakiilka ahaayeen dalkooda.
Hase ahaatee Safiirada dowladda Soomaaliya iyo Diblomaasiyiinta dibadda joogay ayaa bil ka badan ku sugan magaalada Muqdisho, kuwaasoo qaarkood ka qeyb qaata fadhi ku dirir ah Hotelada, waxayna u badan yihiin kuwo xilkooda ku filnaan waayo oo xilal kale u ordaya.
Xilalka ay raadinayaan Safiiradan ayaa isugu jira Ra’iisul Wasaare, Wasiiro, Wasiir kuxigeeno, Wasiiru dowle iyo Agaasimayaal.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu la wareegay xafiiska waxaa uu si deg deg ah u magacaabay Agaasimaha Madaxtooyada oo loo magacaabay Dr. Cali Fiqi oo ahaa Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Belgium iyo Midowga Yurub iyo Qunsulkii Guud ee Safaaradda Soomaaliya ee Jeddah Siyaad Maxamuud Shire oo isna loo magacaabay Agaasimaha Hab maamuuska Madaxtooyada.
Jowhar.com ayaa heshay Safiirada iyo diblomaasiyiintii ku sugnaa Muqdisho ee u ololeynayay Musharaxiintii Madaxweynaha ee tan iyo doorashada ka hor ku sugan magaalada Muqdisho.
Halkan hoose ka akhriso magacyada Safiirada, Safiir kuxigeenada iyo Diblomaasiyiinta Soomaaliya u joogay dalal dhowr ah:-
1- Daahir Maxamuud Geelle, Safiirka Soomaaliya ee Saudi Arabia
2- Siyaad Maxamuud Shire , Qunsulka guud ee Qunsuliyadda Jeddah, Saudi Arabia
3- Axmed Cabdi Xasan ” Axmed Suudaan”, Qunsulka guud ee Qunsuliyadda guud ee Aden, Yemen
4- Cabdullaahi Xaashi Shuuriye , Safiirka Soomaaliya ee Yemen
5- Jamaal Maxamed Xasan,Safiirka Soomaaliya ee Kenya
6- Taabid Cabdi Maxamed , Safiir kuxigeenka “Lataliyaha koowaad” Safaaradda Soomaaliya ee Mareykanka
7 – Ilyaas Sheekh Cumar, Safiir kuxigeenka “Lataliyaha koowaad” Safaaradda Soomaaliya ee Masar
8- Maxamed Isxaaq , Xoghayaha labaad ee Safaaradda Soomaaliya ee UAE
9- Cabdulqaadir Maxamed Nuur , Safiir kuxigeenka “Lataliyaha koowaad” Safaaradda Soomaaliya ee Turkey
10- Cawaale Cali Kullane , Safiirka Soomaaliya ee Sweden
11- Yuusuf Garaad Cumar, Ergeyga joogtada ee Soomaaliya u qaabilsan Xarunta Qaramada Midoobey ee Magaalada New York
12- C/risaaq Faarax Taani, Safiirka Soomaaliya ee dalka Cummaan
13- Dr. Cali Saciid Faqi , Safiirka Soomaaliya ee dalka Belgium ahna Ergeyga Midowga Yurub
14- Cali Shariif Axmed, Safiirka Soomaaliya ee dalka France
15- Maxamed Cali Sayid , Safiir kuxigeen “Lataliyaha koowaad” ee Safaaradda Soomaaliya ee Zambia